Global Voices teny Malagasy » Madagasikara: resaka tati-baovao mandritra ny krizy! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jolay 2009 6:00 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Madagasikara, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Teknolojia
Koa satria moa mbola mitarazoka ny krizy politika eto Madagasikara  saingy efa tsy dia liana amin'ny toe-draharaha loatra intsony ny iraisam-pirenena dia nihaona hiresaka momba ny fanangonana sy ny fitateram-baovao nandritra ny fotoanan'ny krizy ireo ao avy amin'ny fanapariaham-baovao mahazatra sy ireo amin'ny endriny vao haingana (sao miverina matetika loatra ny teny hoe vaovao).
Naresaka tokoa ny fotoana noho ireo fifanakalozan-kevitra, fijoroana vavolombelon'ny tsirairay ary ny hatsaran'ny fandraisam-pitenenan'ny tsirairay ka ireo no nampisongadina fa nilaina ny fiezahana miara-miasa ahafahana mitatitra vaovao feno sy voamarina ny fisiany na dia sarotra aza ny asa.
Tontosa ity fihaonana ity noho ny mpikarakara  sy noho ireo mpandray anjara tamin'ny Barcamp Malagasy voalohany tamin'ny Oktobra 2008 .
Ny zavatra iray tena voamarika dia ny fahamaroan'ny mpanatrika na dia teo aza ny filazana nataon'ny Reporters Sans Frontières  (niniana najanona ho teny frantsay na dia azo nadika hoe Mpitati-baovao tsy voasakan-Tsisitany aza) sy ny Komitim-piarovana ny mpanao gazety  fa mpanao gazety sy mpamaham-bolongana maro na amin'ny ankohonany no nahazo fandrahonana nandritra ny krizy. Nijoro ho amin'ny fahalalaham-pitenenana ny mpandray anjara na dia fantatr'izy ireo tsara aza fa ho fanta-bahoaka amin'izay ny anarana sy ny endrik'izy ireo sady nisy manam-pahefana avy amin'ny fitondrana teo aloha sy ankehitriny aza tamin'ny mpanatrika.
Mpanatrika nandritra ny fihaonana nalain'i ariniaina sary
Nilaina indrindra ny resadresaka satria sarobidy loatra ny mihaino ampahibemaso na mandrakitra ny fitantaran'ny tsirairay izay niainany tsy nijerena fironana politika.
Toy izao manaraka izao ny ambangovangon'ny fotoana:
Teo ho eo amin'ny 80 na 90 avy amin'ny faritra 5 (eto Madagasikara) sy avy amin'ny firenena 4 samihafa no tonga nanatrika.
Alain Andriamiandravola, mpanao gazety teo aloha fa liana kosa amin'ny media vaovao, no nanokatra ny fivoriana izay niofo ho fotoana nitenenana malalaka nahitana hevitra mifanipaka sy nahatsapana ihany fa manana ny heriny ny fahalalam-baovao sy ny fanaovan-gazety.
Nosafoiko vetivety ny fiaraha-miasan'ny fampitam-baovao mahazatra sy vao haingana manerana izao tontolo izao, sy ny fiantraikany goavana nandritra ny krizy ary manantena fa hitera-bokatsoa koa ny thaka izany eto Madagasikara. Nisy zaikakely fanaon'ny Foiben-kolontsaina Amerikana antsoina hoe “Friday talk” (resadresaka isan-joma) nifanatrehan'ny mpamaham-bolongana sy ny manao gazety izay nampiseho fa mbola misy ny toerana ho amin'ny fiaraha-miasa sy fifanabeazana eo amin'ny roa tonta.
Ny tena nahaliana nandritra ny fihaonana moa dia rehefa nifandimby niteny avokoa ireo olom-pirenena avy amin'ny vazantany efatra teto an-toerana nilaza ny fomba nizarany tamin'ny takelakany tsirairay avy izay zavatra hitany sy ny sandan'izany avy eo. Nilaza ny fitiavany hanangom-baovao mivantana i Andry  ka nahatonga azy ho ao anaty kianja mihitsy. I Jentilisa  indray nitantara zavatra hafahafa nandritra ny Alatsinainy maizina (26 Janoary) fa miresaka sahady ny fahamaizan'ny trano iray mbola tsy nirehitra akory ny olona izay mahatonga ny eritreritra fa efa voaomana iny toe-draharaha iny fa tsy kisendrasendram-pihetsiky ny mpitokona. Nitantara ny tahony i Avylavitra  raha nisy miaramila iray nanambana basy azy sy nitaky ny fakantsariny. Jaona  avy any Fianarantsoa nitantara fa notondroina ampahibemaso ho mpanakorontam-bahoaka any an-toerana ny bolongany ka tokony akatona. Maro ny mpamaham-bolongana /mpisioka (twitterers) nizara tantara mitovitovy amin'izany nandritra ny fotoan-tsarotry ny krizy.
Thierry Andriamirado  indray nanazava ny anjara asan'ny tambajotran- tserasera ifampizarana mihamahazo vahana rehefa hifanakalo vaovao momba ny krizy. Thierry no voalohany nitantara mivantana an-tsioka (tweet) ny fotoana nampivarahontsana voalohany indrindra tamin'ny krizy, “Alatsinainy Maizina,” ary nanazavany fa tery izy hitantara eo no ho eo ny toe-draharaha hitany.
Nanitrikitrika avy eo ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera teo aloha Tsilavina Ralaindimby fa asa mahamendrika ny olompirenena ny fijoroana vavolombelona sy ny fikirizana hitantara tahaka izao ka mendrika ny arovana eo amin'ny seha-panjakana.
Tsilavina Ralaindimby, minisitry ny serasera teo aloha, mandrisika ny fanaovan-gazetin'olom-pirenena.
Barijaona Ramaholimiaso  indray nandresy lahatra fa mitaky ny hanehoana ny tena anarany ny etika maha-mpamaham-bolongana azy nefa navoitrany fa misy ihany koa ny karazana endrika faneriterena hafa eto Madagasikara, ny fanerena ara-tsosialy izay mahatonga ny olona tsy ho afaka milaza araka izay tena ao an-tsainy.
Christie Turner sy Affick Gassard indray namahavaha ny ho fampiroboroboana ny “radio communautaire” eto Madagasikara. Nisy ny toerana ambanivohitra vitsivitsy naharaka tsara ny toe-draharaha noho ny serasera sy antso am-pinday ho an'ny tontolo ambanivohitra.
Claire Ulrich  indray nitatitra feno ny momba ny sivana an-tserasera manerantany ka nakany ho ohatra ny any Iran sy Shina ka nanasongadinany ny mahavaindohan-draharaha ny fiarovana ny ain'ny mpanao gazety sy mpamaham-bolongana. Nampitandremany ny mpanatrika hahay hijery tsara hatramin'ny andinin-dalàna bitika indrindra amin'ny lalàna mifehy ny fampitam-baovao an-tserasera hampiharina eto Madagasikara. Navoitrany ihany koa fa tokony hotsarovan'ny roa tonta (mahazatra sy vao haingana) mandrakariva ireo mpanao gazety maty nandritra ny krizy toa an’ i Ando  sy ny hafa.
Farany, nanazava ny sehatra Ushahidi-n'i Foko  i Harinjaka  sy i Arinaina  ary i Tahina  ary nanazava ny nahatonga azy ho nampiasana azy, ny fampiasana SMS-n'ny finday iray hitateram-baovao, sy ho azo ampiasaina ihany koa ho raha sanatria misy ny voina fa azo itaterana voka-pifidianana ihany koa.
Fa manana ny anjara toerany ihany koa ny mpanao gazety. Randy Donny , mpanao gazety sady mpiaro ny fanaovan-gazetin'olo-tsotra no nandresy lahatra fa tsy misy fahasamihafana izany eo amin'ny roa tonta eto Madagasikara. Tamin'ny zavatra rehetra nambarany dia nolazainy fa ny olo-tsotra no tsara fitatitra vaovao kokoa satria tsy misy ny faneriterena avy amin'ny fitondrana nifandimby.
Ny marimaritra niraisana tany amin'ny faran'ny fihaonana dia hoe tena nisy fiantraikany lehibe tamin'ny habetsaky ny vaovao ny krizy. Nifanaiky ny tao amin'ny tontolon'ny fampitam-baovao fa tokony hiezaka tsara ny rehetra hiadiana amin'ny sivana sy ho afa-mamoaka vaovao tsy misy faneriteren'ny governemanta. Fotoana nanararaotan'ny mpanara-baovaon'ny bolongana samihafa ihany koa ity fotoana ity hihaonany mivantana amin'ny mpitatitra vaovao ho azy. Ohatra amin'izany i Jacqueline, anisan'ny mpanatrika, faly tokoa niara-nitafa tamin'ny mpamaham-bolongana Jentilisa. Hoy izy hoe
Mamaky ny bolongany isan'andro aho hatramin'ny volana janoary. Tena mahafinaritra ny mifanatri-tava amin'ny olona tahaka azy
Henoy mandrakariva ary ny toetran'ny fampitam-baovao misy eto Madagasikara.
Indreto tatitra fanampiny momba ny fihaonana:
Madagascar matin ( an-taratasy ihany)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/07/18/2742/
 mbola mitarazoka ny krizy politika eto Madagasikara: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/madagascar-power-struggle-2009/
 mpandray anjara tamin'ny Barcamp Malagasy voalohany tamin'ny Oktobra 2008: http://www.barcamp-madagascar.net/doku.php
 Reporters Sans Frontières: http://www.rsf.org/Growing-threat-to-news-media-from.html
 Komitim-piarovana ny mpanao gazety: http://cpj.org/
 mpisioka (twitterers) : http://twitter.com/saveoursmile
 Barijaona Ramaholimiaso: https://globalvoicesonline.org/2009/07/07/madagascar-traditional-and-new-media-discuss-crisis-reporting/homepage.mac.com/barijaona/
 ireo mpanao gazety maty nandritra ny krizy toa an’ i Ando: https://rising.globalvoicesonline.org/foko/2009/02/14/using-citizen-media-tools-to-describe-the-struggles-of-a-population/
 Ushahidi-n'i Foko: http://foko.ushahidi.com/